Oge ntụrụndụ na njem - iSearch
Dị ka ọrụ n'oge njem ahụ, anyị na-enye "M na-ahụ ihe ị na-ahụghị" na abụ ndị a na-akpọkarị, ọbụna ọrụ redio ma ọ bụ ihe nkiri na ihe ọkpụkpọ DVD ọkpụkpọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume nanị maka mberede - ma ọ bụ na ekweisi: N'ihi na Benjamin Blümchen na njedebe na-adịghị agwụ agwụ abụghị maka mmetụta nro (nne na nna).
N'ikpeazụ ọ bụ oge ezumike nkịtị. Ịhapụ ọrụ ndụ kwa ụbọchị na fanye batrị gị abụghị naanị maka ndị okenye. Ụmụaka ga-achọ ezumike site na ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ. Ọ naghị adị mfe ịmekọrịta ihe niile gbasara ọdịmma ma chọpụta ebe ezumike nke na-enye onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya ụdị ntụrụndụ na ịrụ ọrụ. Ma na obere atụmatụ, ezumike ezumike ezumike ọbụla bụrụ oge mara mma nke afọ.
Nhọrọ nke ụzọ njem kwesịrị ekwesị
N'elu ndepụta mkpebi ahụ, ị ​​kwesịrị ịjụ ajụjụ ụzọ kwesịrị ekwesị. Ụgbọ ala ahụ nwere uru ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ịnwe ike ịgagharị na nnukwu ibu na iji gbanwee oge. Nke a dị mkpa karịsịa mgbe ị na-eme njem na obere ụmụaka. Ịkwesịrị ịhazi oge buru ibu na ọtụtụ nkwụsịtụ - ọkacha mma na mpaghara ebe izu ike karị, nke nwere ebe egwuregwu. Nke a na-emepụta ezigbo nguzozi maka ogologo oge. Site n'ụzọ, ọtụtụ ndị nne na nna kpebiri ịga ezumike n'abalị n'ihi na ha na-atụ anya ka ha na-agba ọsọ. Otú ọ dị, karịsịa n'ebe dị anya, ị kwesịrị iche echiche nke ọma ma ị nwere ịdọ aka ná ntị dị mkpa ịchọta ụra zuru ezu maka onwe gị tupu ị gaa. A sị ka e kwuwe, ụmụaka nwere obi ụtọ na-esikarị ike ịdina ụra ná mgbede na ndị na-arụ ọrụ na ngwugwu ruo mgbe ọgwụgwụ adịghị mma maka njem abalị! Ya mere, ị kwesịrị ịmalite ịrahụ ụra n'ụtụtụ ma weghachi na ezumike.
Nhọrọ ọzọ na-eme njem nleta enyi na ezinụlọ bụ Deutsche Bahn. Ebe ọ bụ na ụgbọ oloko ICE nwere ebe ụmụaka nwere ohere zuru ezu iji kpọọ, ha dị mma maka njem ezinụlọ. Echiche site na windo, nleta ụgbọ ala ma ọ bụ ihe eji egwuri egwu na-eweta dị iche iche iji mee ka njem na nwatakịrị malite ná mmalite iji mee ntụrụndụ. Ọ ga - abụ ihe na - agwụ ike ma ọ bụrụ na ị ghaghị ịgbanwe ọtụtụ ugboro. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji nyochaa njem njem zuru ezu tupu ịtinye akwụkwọ!
Ọ bụrụ na ị kpebie ime njem, ị ga-ahụ na nwa ahụ dị ike tupu ị gaa njem. Ịgba ọsọ na akpịrị, ọrịa ihu ma ọ bụ ntị nwere ike ịgbu mgbu. Iji chefuo mmeghari nke nrụgide n'oge ịrịgo ma ọ bụ ebe ugwu, sprays na-enyere aka wepụ na ala. Ma, ọ bụ ihe ọhụụ ọhụrụ na-edozi nrụgide, ngwọta. N'aka nke ọzọ, ụmụ ọhụrụ bụ enyemaka kasị dị irè maka ndị na-eme pacifiers ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike. Ọ bụrụ na a na-emegharị ihe a, njem ikuku na-ekwe nkwa ịghọ ahụmahụ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, karịsịa maka ndị na-eto eto. N'ihi oke nkwekọrịta dị oke, oge kacha elu nke ihe dịka elekere atọ ka akwadoro maka ndị na-eto eto.
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ njem?
Karịsịa na njem ụgbọ ala ka ogologo, ọrịa njem na-esikarị esonye, ​​karịsịa ụmụaka ndị toworo eto. Iji zere nke a, a ga-ezere akwụkwọ na egwuregwu kọmputa mgbe ị na-anya ụgbọala. Dịka ihe ngwọta ngwa ngwa ma dị irè maka ọganihu njem ụgbọ mmiri na-ebugharị buulu gọọmenti. Tụkwasị na nke ahụ, eriri acupressure adịbeghị anya. Ha enweghị ihe ọ bụla na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nanị site n'itinye mgbali ọkụ na ihe ndị dị mkpa. Nke a na-eme ka ha dabara adaba maka ụmụaka.
Ebe ezumike kacha mma maka ezinụlọ nwere ụmụ
Ma osimiri ma ọ bụ oké osimiri, ugwu ma ọ bụ ugbo - na ebe ị ga-aga ebe ị ga-eji nwayọọ na-emetụta ụmụ gị. Karịsịa oge ezumike na-abụkarị onye na-agba ọsọ onwe ya, n'ihi na ụmụ nwere ike ịbanye n'ime obi ha ma chọpụta ebe ha dị. Ma obughi maka mmadu nile, ezumike n'enweghi ihe oma ma obu ochicho ndi omenala ime. Mgbe ahụ, ọ kacha mma ịchọta nkwekọrịta. Ememe n'ememe ezinụlọ nwere ike ịbụ nhọrọ kwesịrị ekwesị na nke a. Ọ na-enye ụmụaka ohere dịgasị iche iche, ebe ndị nne na nna nwere ohere maka onwe ha. Ịga njem ndị ahụ wee bụrụ ahụmahụ ezinụlọ. Ndị chọrọ nnwere onwe na nnwere onwe pụọ n'oge nri nri maka ezumike ha kwesịrị ịtụle ịnọ n'ụlọ ezumike. Ọbụna ụlọ mposi na-enye taa nkasi obi ma na mgbakwunye na ụlọ obibi na ebe obibi mobile na-enwekarị ụlọ.
Maka ezumike na-aga nke ọma, ị gaghị aga ebe dị anya. Enwee ike inwe obi ụtọ na ogige ntụrụndụ ma ọ bụ ogige ntụrụndụ dị nso. Na ụbọchị na-agakwa n'ogige ntụrụndụ ma ọ bụ ntụrụndụ na-eme ka ezumike oge bụrụ ahụmịhe. N'ozuzu, ọ bụrụ na ụmụaka nwere obi ụtọ ma na-arụsi ọrụ ike, mgbe ahụ ezumike ahụ bụkwa maka ndị nne na nna maka ntụrụndụ!
Chọpụta ụdị ezumike gị na ezinụlọ gị. Anyị ndu na-enye gị ndụmọdụ bara uru maka a ezumike ezumike oge!
226,401FansỌ masịrị m
6,540debanyere ahadenye aha